Somalia oo la sheegay inay tahay il-tamareed uu caalamku isha ku hayo (Caqabaad hor taagan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo la sheegay inay tahay il-tamareed uu caalamku isha ku hayo...
(Hadalame) 08 Luulyo 2020 – Somalia ayaa la sheegay inay ka mid tahay meelaha yar ee haray ee aan weli lasoo saarin saliid aad u fara badan iyo khayraad kale oo dhex ceegaaga, iyadoo gaar ahaan dhanka saliidda haatan isha lagu hayo, sida uu xitaa ka dhawaajiyey Danjiraha Maraykanka ee Somalia.
Somalia oo ah dal fursad badani hor taallo ayaa tan iyo markii uu xornimada qaatay in yar uun kaddib waxaa la koowsadey siyaasado qabyaaladi hagto oo aan aragti iyo hiraal fog xambaarsanayn, yeelkeede, haatan oo ay socoto kabasho heer qaran ah oo caqabaad badan la hor dhigayo, waxay Somalia bixisay shatiyo lagu sahminayo shidaalka badda, taasoo ay diideen gobollada qaar.
Sida ku cad xog-dhuleedka laga hayo sahanka la sameeyey oo daboolaya dhul gaaraya 20,000 km oo jibbaaran qaab 2D ah, waxaa la sheegay inay halkaa ku jiraan dhagxaan laga dhiijiyo shidaal aad u tayo badan oo kor u dhaafaya 30 bilyan oo fuusto, waana qayb yar oo ka mid ah dhulka la sahmiyey.
Sidaa darteed, dalka Somalia ayaa haysta fursad wayn oo uu ku noqon karo cudud dhaqaale oo gobol iyo mid caalami ah, balse waxaa qaaquullooyin siyaasadeed iyo mid bulsho ka oogaya canaasiir wejiyo badan oo ku shaqeeya ajendeyaal caalami ah, kuwaasoo ay qaarkood yihiin inay lasoo saarin shidaalka Somalia, ama ugu yaraan la ragaadiyo gaarista hadafkaasi, intii suuragal ah.
Previous articleGOOGOOSKA: AC Milan vs Juventus 4-2, Arsenal vs Leicester City 1-1 (Juve oo la jiidey)
Next articleQM: Dilkii khaarajinta ahaa ee uu Maraykanku u gaystey Qasem Soleimani wuxuu ahaa sharci darro (Hindise ay soo jeediyeen)